Iindaba-Ukwanda komsebenzi we-SJZ CHEM-PHARM CO., LTD-Uhambo oluya e-Jiulongtan
Ngo-Okthobha u-31, 2019, kweli xesha lekwindla legolide, i-SJZ CHEM-PHARM CO., LTD iququzelele abasebenzi ukuba benze imisebenzi yokunyuka kwentaba kunye nophuhliso kwiJiulongtan Scenic Area yePingshan County, Shijiazhuang.
Ukujongana nelanga lasekuseni kusasa, siqale uhambo oluya kude nesiphithiphithi sedolophu. Yiya ezintabeni kwaye uphefumle umoya ohlaziyayo wendalo. Kwinkqubo yokunyuka ngaphandle, akukho mntu wakhwaza ubukrakra nokudinwa, akukho mntu washiywa ngasemva kwaye warhoxa, kwaye abanye babezama ngenkalipho ukufumana indawo yokuqala kunye nokusebenzisana kuyo yonke indlela. Ukudinwa kukunyuka intaba kujike kube luvuyo lokuphumelela ekuhlekeni okuhlaziyiweyo. Ngelixa uzilolonga kwaye wonwabile, ikwabonakalise ngokupheleleyo umgangatho kunye nomfanekiso weqela lethu laseChenbang. Emva kokukhwela, saya kwigadi yegadi yama-apile siyokukhetha imisebenzi, singcamla ii-apile ezisandula ukukhiwa emithini, sisondela kwindalo kwaye sonwabela uvuyo lokuvuna.
Ukuthatha imisebenzi yokufikelela ngaphandle njengebhulorho, umbutho uququzelela ukunyuka kwabasebenzi, ukukha iigadi, kunye namatheko okutya, okunciphisa uxinzelelo lomsebenzi wabasebenzi kunye nokunciphisa umgama phakathi koogxa. Idala amathuba onxibelelwano phakathi koogxa. Abasebenzi abancinci bafumana ulwazi ngakumbi ngokwabelana ngamava ngabasebenzi abadala, kwaye abasebenzi abadala bayasulelwa bubutsha bolutsha. Wonke umntu unokuqonda okutsha komnye nomnye kwaye womeleze umanyano lweqela leChempharm.